अभियान अभिलेख - मानव अधिकार र प्रकाश कला ∴ पिक्सेल हेल्पर फाउन्डेशन द्वारा
12 मार्स 2018
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 12। मार्च 2018
#PixelHELPER Daphne Caruana Galizia को समर्थन को गिरफ्तारी मा जानकारी को लागि € 100,000 को प्रशंसा गर्दछ। कृपया हाम्रो अभियानलाई pixelhelper.org/en/donate मा समर्थन गर्नुहोस्
"अरूको रगतले लेखिएको घोषणापत्र" - यही कुरा अमेरिकी इतिहासकार माइक डेभिसले कार बमलाई भने। यी घोषणापत्रहरूमा अन्तिम जानकारीमा सेमेटेक्स थियो जसलाई प्लास्टिक विष्फोटक पनि भनिन्छ, बिल्निजाको ड्राइभवेमा सेतो प्यूजोट १० 108 को भुइँमा जोडिएको, 309० inhabitants जना बासिन्दा, माल्टाको राजधानी भेल्टाबाट एघार किलोमिटर पश्चिममा।
अक्टुबर १ On मा, ap 16 बर्षे डाफ्ने कारुआना गालिजिया आफ्नो कारको पछाडि पछाडि छन्। उसले बजरी सडकलाई मुख्य सडकमा तान्छे, बाँया पछाडि, पहाडबाट तल समुद्रको टाढाको उज्यालो देख्न सकिन्छ, सानो, ज wild्गली ल्यान्डफिल र एक जुच्चीनी मैदान, २53० यार्ड पछाडि, रातो-रिम्ड चिन्हमा, जुन हेजहोगले ड्राइभरलाई उसको बराबरी सपाट नगर्न भन्दछ। अन्वेषकहरुका अनुसार विस्फोट मोबाईल फोनबाट सुरु गरिएको हो। १ 270.०15.04 घडीमा प्यूजियट्सका अवशेष १०० मिटर अगाडि मैदानमा छन्, सडकको छेउमा। भेल्टाटाको मेटर-डेई अस्पतालमा तीन दिन पछि गालिजियाको शरीरको निरीक्षण गर्ने सात डच फोरेंसिक वैज्ञानिकहरूले त्यति धेरै देख्न पाएनन्। त्यहाँ देशको सबैभन्दा प्रसिद्ध र सबैभन्दा अस्पष्ट पत्रकार को शरीर को बाँकी छ। उनीले आफ्नो मृत्यु भन्दा २ minutes मिनेट पहिले उनको ब्लगमा अन्तिम शब्दहरू पोष्ट गरिसकेकी थिईन्: "तपाई जुनसुकै ठाउँमा हेर्नु भए पनि जताततै त्यहाँ बदमाशहरू छन्। यो निराश हुनु हो।
एक हप्ता पछि, गलिसियाका तीन छोरा स्ट्रासबर्गमा युरोपेली संसदमा छन्, उनीहरूको आमाको हत्याले माल्टा र सम्भवतः ईयुको बारेमा के भन्छ भन्ने बारेमा बहस गर्दै। हरियो MP Sven Giegold माइक्रोफोन ले। “डाफ्ने सडकमा मारिए। त्यहाँ कुनै लुक्ने ठाउँ थिएन, तिनीहरूका हत्यारहरूले आक्रमणलाई दुर्घटना जस्तो देखाउन खोजेनन्। यसको विपरीत, यो शक्तिको क्रूर प्रदर्शन थियो, "उनी भन्छन्। बम किन पुलिस प्रमुख वा अटर्नी जनरलको गाडीको अधीनमा थिएन भन्ने कुरा स्पष्ट थियो: "यो डाफ्ने हो जसले माल्टामा पैसा laण दिने र भ्रष्टाचारको प्रणालीमा प्रकाश पार्छ - ती अधिकारीहरू थिएनन्।"
उक्त समारोह स्ट्रासबर्गमा भइरहेको बेला इटालियन एन्टि-माफिया आयोगका प्रमुख रोजी बिंदी भलेटाको प्राचीपमा एक्सेल्सियर होटलमा छिर्छन्। केही दिनसम्म, आयोग माल्टामा थियो, लामो यात्राको लागि योजना गरिएको थियो, तर अब, ब्ल्गरको हत्या पछि, चासो ठूलो छ। चिकनी सेट अंगरक्षकहरूले घेरिएको, जसको सूटहरू उनीहरूको ईयरकपमा पारदर्शी केबलहरू पक्रन्छन्, बिंदी तल टेबलमा बस्छिन् र पत्रकारहरूलाई हेरी, जो भारी छालाका आर्मचेयरमा उनीहरूको लागि पर्खिरहेका थिए। बिंदी भन्छिन्, माफियाले माल्टालाई “सानो स्वर्ग” को रूपमा देख्यो र "वित्तीय सेवा प्रदायकहरू जसले माल्टामा व्यवसाय खोल्न प्रस्ताव गर्न सक्दछन्" पनि "समस्याको एक हिस्सा" हुन्।
माल्टाका लागि, बिंदीका वक्तव्यहरू समस्या हुन्। उनी दशकौंसम्म इटालियन माफियामा विशेषज्ञ छिन्, त्यसैले उनको शब्दको वजन छ। माल्टा ग्यालिसियाको हत्या पछि यो प्रतिष्ठाको लागि स .्घर्ष गर्दै आएको छ।
उनको हत्या, जस्तै यो द्वीपमा भनिएको छ, अपराधको विरुद्ध लड्ने गम्भीर व्यक्तिहरू जो मल्टाको बारेमा निश्चित छैनन्।
कर दशौंौंदेखि कर चोरीमा संलग्न रहेको र गालिजियाको अनुसन्धान जान्नुहुने जीगोल्डले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरू पठाउन आह्वान गरिरहेका छन्। उनले समाजवादी प्रधानमन्त्री जोसेफ मस्कटको राजीनामाको लागि आह्वान गरे र युरोपियन संसदले माल्टामा “कानूनको शासन पुनःस्थापना गर्न” प्रतिनिधिमंडल पठाउन चाहेको कुरा सुनिश्चित गरे।
दुई वर्षमा पाँच कार बम
उनी एक्लो छैनन् जसले यसलाई त्यसरी देखिन्। यदि यी दिनहरू टापु राज्यमा रिपोर्ट गरिएको छ भने, त्यसपछि कालो पैसा लेटरबक्स कम्पनीहरू, कर हभेन्स, अन्धकार जडान अजरबैजान, तेलको तस्करी, पास बिक्री र अनलाइन जुवाको कुरा गरिन्छ। ग्यालिजियाको महान इतिहासले पनि यसमा योगदान पुर्‍याएको छ। उनको छोरो म्याथ्यू अनुसन्धान नेटवर्क IJIC मा काम गर्दछ, जसले २०१ Pan पानामा कागजातहरूको अनावरण गर्‍यो। उसको बारेमा गालिजियाले माल्टा सम्बन्धी कागजातहरू प्राप्त गर्‍यो। उनले पत्ता लगाइ कि प्रधानमन्त्री मस्कटका क्याबिनेट प्रमुख किथ स्म्ब्री, र उनका सहकर्मी कोनराड मिज्जी, जो पहिले ऊर्जा, अहिले पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ, उनले ब्रिटिश भर्जिन टापु र पानामा कभर कम्पनीहरू राखेका थिए। यी सबै अहिले एक अन्धकारमय चित्रमा विलीन भइरहेको छ, जहाँ राजनीतिज्ञहरूको शंकास्पद निजी व्यवसाय, विवादित सार्वजनिक राजस्व प्रवाह र संगठित अपराध बीचको सीमाहरू विघटन भएको देखिन्छ।
यो तस्विर हो कि भालेटा शहरको उपनगरीय शहरहरू, व्यापारी र ट्यान्ड विद्यार्थीहरूले भरिएको, कार-रहित, बालुवा र old्गको पुरानो शहर जुन नौ हप्तामा यूरोपको सांस्कृतिक राजधानी हुनेछ - एक बेमेल खुला-मध्ययुगीन संग्रहालय जुन प्रत्येक दिनको माध्यमबाट हजारौं पर्यटक गाईडहरू अनुसरण गर्छन् जस्तै उनीहरूको रंगीन पेनन्टहरू जस्तै उनीहरूको स्तरको क्रुसेडरहरू, त्यसपछि बेलुका सेन्ट जुलियनमा, खाडीको अर्कोपट्टि, स्प्रेले सन्तुष्ट, रातो दाखमद्यमा खरानी र टिपिंग जस्तो टिप्स। Cisk शिविर।
ती मध्ये केही जोनाथन फेरिसलाई हेरचाह गर्छन्। गालिजियाको मृत्युपछि आठौं दिनमा, उहाँ नीलो सूटमा पातलो चश्मा लगाएर वेस्टिन ड्रगोनराको लबीमा बस्नुहुन्छ। काँचको अनुहार पछाडिका छालहरू ढुocks्गामा हिर्काउँथे, सोफामा नाविकको पहिरनमा राम्रा-राम्रा परिवारहरू बसिरहेका थिए। फेरिस पाँच-सितारा होटल को सुरक्षा प्रमुख हो, र यसले सुझाव दिन्छ कि माल्टामा चीजहरू उनीहरूको चालमा चल्दैनन्।
किनकि एक बर्ष पहिलेसम्म फेरीस पुलिस अफिसर थिए, मनी लाँड्रिंगका लागि जिम्मेवार थिए। उसले भन्छ, गालिजियाको ब्लगले उनलाई सधैं अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍यायो। “उनलाई हामी जान्दैनौं चीजहरू थाहा थियो। मानिस पत्रकारहरुलाई प्रहरी अधिकारीहरु जस्तै विश्वास गर्छन्। “फेरीसले ब्रसेल्स, चीन, जर्मनीमा शिक्षित सहकर्मीहरू, उनले गद्दाफीको एकाउन्टेन्टलाई नोभेम्बर २०१ 2016 मा स्थानान्तरण गरे, उनी विभाग प्रमुखका रूपमा माल्टिस एन्टी मनी लाउन्डरिंग अथारिटी (एफआईएयू) मा सर्छन्। मार्च २०१ 2016 र जुलाई २०१ween बीच, सरकारी अधिकारीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारको बारेमा चार रिपोर्ट लेखिएको छ। सबै, फेरीस भन्छन्, गलिसिया द्वारा गरिएको अनुसन्धानमा आधारित थियो। जो उसलाई पछ्याउन चाहन्छ, यदि ऊ विवरणहरूमा जान्छ, समय लाग्छ।
एफआईएयू अनुसन्धानको सारांश यसप्रकार छ: क्याबिनेट प्रमुख किथ शेम्ब्र्रीले पनामामा आफ्नो मेलबक्स कम्पनीलाई १०,००,००० युरो लुकाउन प्रयोग गरे जुन उनले रसियालीहरूलाई तीन माल्टिन पासपोर्ट बिक्रीबाट प्राप्त गरे। उसले माल्टिज अखबारका म्यानेजरलाई half० लाख यूरो घूस दिएको थियो। फेरिसको विश्वास छ कि शेमब्र्री सरकारी अखबारको तौल कायम गर्न सुनिश्चित गर्न चाहन्थे। उही समयमा उनी यो कुरा निश्चित गर्न चाहन्थे कि कागजले उनीबाट उनीको कागज प्राप्त गरिरहेछ, किनभने दोस्रो व्यवसायमा स्म्भेरी पनि कागजको थोक बिक्रेता हो। र: शेम्ब्र्री र पूर्व ऊर्जा मंत्री कोनराड मिज्जीले दुबईबाट माल्टामा तरल पदार्थ ग्यासको कारोबार गर्ने कम्पनीबाट घूस लिएका थिए। यो पैसा दुबैको लेटरबक्स कम्पनीहरूमा पनि प्रवाह गरिएको थियो। गालिजियाको अन्तिम ब्लग प्रविष्टि "जताततै बदमाशहरू" यी व्यवसायहरूलाई दर्साउँदछन्।
गैस ठेकेको लागि 1.07 मिलियन यूरो?
Schembri र Mizzi सबै कुरा अस्वीकार गर्दछ। माल्टामा कानूनको शासनको बारेमा धेरैलाई के शंका लाग्छ: एफआईएयूका रिपोर्टहरू या त प्रहरीलाई पठाइएको थिएन - वा अधिकारीहरू मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा मुद्दा हालेका थिए। तिनीहरूको कुनै परिणाम थिएन।
उक्त रिपोर्टमा या त फेरीस, उनका सहकर्मी चार्ल्स क्रोनिन वा पूर्व एफआईएयू मालिक मन्फ्रेड गल्डेज संलग्न थिए। कोही पनि अफिसमा छैनन्। गालडेज आफ्नो अवधारणामा, प्रारम्भिक सेवानिवृत्तिमा गए। १ June जुन २०१ 16 मा, उनका उत्तराधिकारी फेरीस र क्रोनिनले हातमा नोटिससहित सेतो खाममा थिचे। फेरी भन्छिन्, “मलाई यसको कारण कहिल्यै थाहा भएन। त्यसबेलादेखि ऊ केवल गोलीसँग निदाउन सक्छ। एफआईएयूले ताजलाई भन्यो कि उसले "प्रदर्शनका कारणहरू" को कारण फेरीस र क्रोनिनलाई खारेज गर्ने सब भन्दा राम्रो चासोमा छ।
यदि उनी एफआईएयूसँग बसेका भए उनले गलीलियाको अन्तिम महान इतिहास अनुसरण गर्ने थिए, फेरीस भन्छन्। यो प्रिमीयरकी श्रीमती मिशेल मस्कटको बारेमा थियो। पनामा मा उनीहरुको कम्पनी एगरान्टको खाता अजरबैजानबाट १.1.07 मिलियन युरो हुनु पर्ने थियो - माल्टा र अजरबैजानले १ 18 बर्ष संग ग्यास आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेपछि न्यायसंगत। “उनीहरूले यो अनुसन्धान रोक्न चाहेका थिए,” फेरिस विश्वास गर्दछन्। उनले पुन: स्थापित गर्न एन्टी-भ्रष्टाचार अख्तियार दायर गरेको छ।
एफआईएयूका रिपोर्टहरू समेत परिचित थिए, एक व्यक्तिको कारण हो जसले आफूलाई "राजनीतिमा डाफ्नेको सहयोगी" भन्छ र उनीहरूको विश्वासपात्र थियो। साइमन बुसुटिल एक मात्र विपक्षी पार्टी कट्टरपन्थी PN का एक सहायक हो; एक अमेरिकी टेलिभिजन प्रचारक को शैली र आवाज संग एक मानिस, आफ्नो मन्दिरहरु चकनाचूर, कालो शोक लेपल मा फीता। "व्हाट्सएप मार्फत मात्र समाचार," उनी भन्छन्। "मेरो फोन अनुगमन भइरहेको छ।" पर्यटकहरूलाई संसदको सदनमा विपक्षी सम्मेलन कोठामा स्वागत गरिन्छ, एक्वैरियमजस्तो ठाउँ जुन भालेटाको पैदल यात्री सडकमा ओर्लन्छ।
रिट्रिट अब मान्य छैन
गैलिजियाले सरकार विरुद्ध धेरै भन्दा बढी सामग्री उन्मूलन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री मस्कटले गत जुन महिनामा चुनावलाई प्राथमिकता दिए। बुसुट्टेल विपक्षी दलका शीर्ष उम्मेदवार थिए। कसैले उसलाई एफआईएयू रिपोर्टहरू राखे। बुसुट्टीलले सबै विवरणहरू प्रेसको अगाडि स्वादसहित फैलाए। यसले सहयोग गरेन: माल्टिस मस्कटप्रति वफादार रहे। बुसटिल हरायो, जुन माल्टाको अर्थव्यवस्था फस्टाइरहेको कारणले हुन सक्छ। "त्यस पछि म बिस्तारै राजनीतिबाट हट्न चाहन्थें," उनी भन्छन्। "तर अब, उनको मृत्यु पछि, सबै फरक छ।"
जुलाईमा बुसुट्टेलले पुलिसलाई मन्त्रीहरूले अनुसन्धान गर्न मुद्दा हालेको छ। स्जेम्ब्री र मिज्जीले आपत्ति दर्ता गरेको छ। "यदि मैले हराए भने म स्ट्र्यासबर्ग जान्छु," बुसुटल भन्छन्। ऊ गालिजियाको काम सिध्याउन चाहन्छ।
यो ब्लगरले मस्कट, सरकारको बाँकी सरकार, साथै विपक्षका ठूला वर्गहरूलाई ठूलो आक्रमण गरेको छ। "चतुर लेखहरू" को साथ भाग लिनुहोस्, किनकि सत्तापक्ष पार्टीको मुख्यालयमा तिनीहरूका सबैभन्दा खराब शत्रुहरू PL भन्छन्। आंशिक रूपमा उनको व्यक्तिगत जीवन र उनको यौन जीवन को बारे मा पाठहरु संग। तर माल्टामा कसैले पनि गम्भीर रूपमा विश्वास गर्दैनन् कि यो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हो जसले उनको कारको मुनि बम अड्यायो।
माल्टा - र इटालीमा सबैभन्दा धेरै सुनिने सिद्धान्त यो हो कि गलिसियाले माफियाको खोजीमा लिबियाबाट दक्षिणी यूरोपमा तेल तस्करी गर्न खोजेको छ। यस धारणालाई यस तथ्यले समर्थन गर्दछ कि विगत दुई वर्षमा माल्टामा five वटा कार बम आक्रमण भएको छ जसका पीडितहरू आपराधिक गिरोहबाट आएका छन्। कसैलाई पनि सूचित गरिएको थिएन। हरेक पटक सेमेटेक्स प्रयोग गरिएको थियो। यो उत्पादन गरिएको छ, उदाहरणका लागि, लिबिया जुवारामा - जहाँ तस्करीको तेल आउँदछ।
विपक्षी अनइलोजी छैन
यद्यपि माल्टाका धेरै जना मस्कटलाई गलिसियाको मृत्युको लागि जिम्मेवार ठान्छन् र राजीनामा गर्न भन्छन्। त्यति धेरै होइन किनकि पुलिसले गालिजियालाई बचाएन। वास्तवमा, ब्लगरले विगतमा पुलिस सुरक्षालाई अस्वीकार गरेको थियो किनभने उनी डराउँछिन् कि यसले उनको कामलाई असर गर्छ। मस्कट, गालिजियाको परिवार, विपक्षी र माल्टिज पत्रकारहरू विरुद्ध लगाइएको आरोपको रक्षा गर्दै एमईपी बुसुट्टेलले भनेका छन्: "भ्रष्ट मन्त्रीहरुलाई पदमा रहन दिएन भने तपाई भ्रष्टाचारको बिरूद्ध केही गर्न सक्नुहुन्न।" तिनीहरूको व्यवसाय सहन गर्न राज्यले संस्थालाई कमजोर बनाइरहेको छ - र यसैले संगठित अपराधीहरूको व्यवसायलाई सहन्छ।
यद्यपि, विपक्षमा परिस्थितिमा अनावश्यक छैन। माल्टा आर्थिक तवरमा अत्यन्त कम कर्पोरेट करहरू, अनलाइन जुवा उद्योग र धनी विदेशीहरूलाई पासपोर्टको बिक्रीमा निर्भर गर्दछ। Busuttils PN ले योगदान गर्दछ। "माल्टाले यसको सार्वभौमिकता फोहोर पैसामा बेचेको छ," ग्रीन गिगोल्ड भन्छन्। "यसले कानूनको शासनलाई राजनीतिक र वित्तीय सम्भ्रान्तहरु बीचको दण्डहीनता र क्रान्तिको संस्कृतिले बदल्यो।"
माल्टा मा क्यासिनोस्टाडट सेन्ट जूलियन्स मा म्याफियर परिसर द्वीप मा धेरै कार्यालय भवनहरु मध्ये एक हो,
Daphne Caruana Galicia मार्च 12th, 2018Oliver Bienkowski
24 2017 सक्छ
नैतिक इस्लामी विरुद्धको अभियान
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 24। मई 2017
राधात्मक इस्लाम विरुद्ध अभियान
हामी जर्मन इस्लाम समुदायहरुमा जर्मन कानूनको बिरूद्ध जासूसीको कारणले आएको र # कुर्दिस्तानमा युद्ध प्रचारको लागि उनको हातमा तरवारले उल्लंघन गरेकोले प्रतिबन्धको माग गर्दछौं। लाइट आर्ट # Karikaturen को DITIB केन्द्रीय मस्जिद - कोलोन # Moschee #Deutschland मा सबै भन्दा ठूलो मस्जिद संघ, # DITIB टर्की धार्मिक ब्यूरो # Diyanet संग जोडिएको छ। धार्मिक मामिलाको प्रेसिडेंसीले समुदायको सदस्यहरूको तपाईंको # इमान गतिविधिहरूमा "विस्तृत रिपोर्ट" बोलाउँदछ। टर्की राज्यले धार्मिक स्वतन्त्रताको आडमा जासूसहरू चलाउँछ।
इमेजको जासूस रिपोर्ट
१. न्यूवाइक: क्षेत्र ए को लागी जिम्मेवार छ र सक्रियताका साथ यस संरचनाको लागि काम गरिरहेको छ। त्यसकारण उसले #Putschversuch जुलाई १ 1 पछि पकड गर्छ, यसको स्थितिमा लाग्दछ। (...) तेस्रो RA: #Moscheegemeinde को बोर्डबाट कुपन प्रयासमा फिर्ता जानुहोस्। पक्राउ वारन्ट AA मा खोजिएको एक जैविक भतिजा हो, # Zeitung #Zaman का पूर्व लेखक। #Spendensammlungen यस संरचनालाई #Opferfest मा भूमिका खेल्छ। (...) T. T.eयहाँ अध्ययनको क्रममा, उनी यस संरचनामा #Whnheime मा बसिरहेकी छिन् र # ब्रउटको रूपमा # ड्युचल्याण्ड आईपुगेकी छिन। यदि तिनीहरू वास्तवमै संश्लेषण # संरचनाको गतिविधिहरूमा संलग्न छैनन् भने, तिनीहरू यस संरचनामा झुकाव हुनुपर्छ।
उक्त रिपोर्टको अन्तमा यसो भनिएको छ: "यी नामहरू जुलाई १ 15 को कुख्यात प्रयासको केही बेरपछि रिपोर्ट गरिएको छ, केही अवलोकनकर्ता समुदायका सदस्यहरूले सक्षम राज्य निकायहरू र विदेशमा टर्की अभियानमा गएका छन्।"
नैतिक इस्लामी विरुद्धको अभियान फेब्रुअरी 19th, 2018Oliver Bienkowski
24 2016 सक्छ
ग्रीक ओलिगेरिया विरुद्ध अभियान
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 24। मई 2016
लोकतान्त्रिक पालना एक ओलिगेरिया हो
विनाशकारी आर्थिक मंदीको बावजूद, 'सुधार' को बावजूद, ग्रीस अझै पनि अलिग्राहीहरु को हात मा दृढतापूर्वक छ। तपस्याको राजनीति मात्र यस स्थितिलाई लागू गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै भन्दा धेरैको शक्ति बढ्छ। त्रिकाको आशीर्वादको साथ, राज्य सम्पत्ति बेचीन्छ।
बिग ब्रदरले ओर्कवेलको 1984 को नागरिकलाई हेर्दै छ। ठूला पोस्टर र पर्दाहरूमा, हरेक व्यक्ति को मालिक देखाउने: एक क्रूर, समग्रतावादी राज्य। आजका मालिकहरू, जो कि चीजहरू चलाउँछन्, धेरै अत्याधिक, कम प्रोफाईल, लुकेका छन्। हामी PixelHELPER हौं, र हामी ती बिर्सिएका अनुहारहरूमा ठूलो प्रकाश चमक गर्न फेब्रुअरी एथेन्स आइपुग्यौं। हामी ग्रीस जनताको विरुद्धमा ठूलो अन्याय उजागर गर्न यहाँ छौं। , OPAP, मोटर तेल HELLAS र ग्रीक संसद को "संघीय गणतन्त्र" मा Orwellian अनुमानहरु पिक्सेल सहयोगी द्वारा मंचन, ग्रीक र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मा एक लहर प्रभाव सामने कुलीन वर्गहरु को लुकाइन् शक्ति ल्याउन सिर्जना गर्न सेवा गर्छन्। हाम्रो हस्तक्षेप यूनियन पावर न्यूक्ससमा दुई मध्यका आधारमा केंद्रित छ।
[ग्यालरी_ बैंक प्रकार = "छवि" ढाँचा = "चिनाई" शीर्षक = "सत्य" desc = "गलत" img_in_row = "3 ″ प्रदर्शन =" सबै "क्रमबद्ध_बाइ =" अनियमित "एनिमेशन_अफेक्ट =" बाउन्स "एल्बम_टिटल =" गलत "एल्बम_आईडी =" १″ ″]
डिमिट्रिस मेलिसानिडिस, "टाइगर" उपनाम दिए, र चेक को लगानीकर्ताको कन्सोर्टियम संग, सरकारी वास्तविक जुवा एकाधिकार ओ.ए.पी.पी. लाई यसको वास्तविक मूल्यको अंशको लागि किन्न सक्षम भयो। ओपिएपको बिक्री प्रक्रियालाई ग्रीक मिडियाले कुनै प्रश्न उठाएको छैन किनकि ग्रीसमा ओपीएपी सबैभन्दा शक्तिशाली छ भने मिडियाको बजेट [II१] ले ग्रीसको मुख्य प्रवाहमा रहेको ग्रीस मिडियामा यसको लाभ उठाउन असम्भव देखिन्छ। पत्रकारहरूले मेलिनिडाइसको शक्तिलाई प्रश्न गर्छन् कि उनीहरू डराउँछन् र उनीहरूको ज्यानसमेत दिन्छन्।
Vardis Vardinogiannis र तिनको परिवारलाई "राज्यभित्र राज्य" भनिन्छ। विश्वसनीय र अफवाहहरू छन् कि यसको तेल कम्पनी कारण हुन् जुन ग्रीक द्वीपहरू प्रायः स्वच्छ अक्षय ऊर्जा स्रोतहरूको सट्टा गंदे र महंगी डीजल जनरेटरहरूमा चल्छन्। वर्डनिनिगियन्सको क्यान्सर शक्ति ग्रीसमा विवादित छैन, किनभने तिनीहरू दुई प्रमुख टिभी च्यानलहरू, फुटबल टोलीहरू र पहिले बैंकिंग क्षेत्र हो।
पिक्सेल हेल्परले ग्रीसलाई लोकतान्त्रिक बनाइन्छ। राजनीतिक दलहरु को वित्त पोषण र राजनेताहरु को व्यक्तिगत वित्त को विषय मा तंग-लिप गरियो कानून को लागू गर्न को माध्यम ले। को नोवार्टिस घोटाले, सबै हाल unfolding र उच्च-र्याङ्किङ्ग राजनीतिज्ञ (पूर्व प्रधानमन्त्री Antonis Samaras सहित), रेखा अन्तर्गत यो मुद्दा कसरी महत्त्वपूर्ण समावेश छ जो। दुर्भाग्यवश ग्रीक संसद, SYRIZA chairwoman Tasia Christodoulopoulou द्वारा लाग्यौं को पारदर्शिता समिति, बायाँ र दायाँ नेताओं को चासो रक्षा गर्न जारी। भर्खरै प्रकाशित प्रकाशित रिपोर्टमा समितिले राजनीतिक दलहरूको आफ्नै कार्यको लागि आलोचना गर्दछ। यो अस्वीकार्य छ र संसारमा चीज कसरी गर्ने भनेर देखाउँछ।
पिक्सेलहेलर यसरी यसरी सोध्छ कि हालको निजीकरणलाई जाँच र पुन: मूल्याङ्कन गरिएको छ, ग्रीक जनताको लागि उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न। एक स्वतंत्र अन्वेषण गर्नु पर्छ।
हामी युनिभर्सिटीसँग अलिग्राहीहरू विरुद्धको संघर्षमा एकतामा उभिरहेका छौं जुन देशभित्र परजीवीहरू छन् जसले गरीबीमा जीवन बिताउने तेस्रो भन्दा बढी छ। धूर्त भ्रष्टाचार अब समाप्त हुनेछ, वा ग्रीसको लागि साँचो रिकभरीको लागि कहिल्यै मौका हुनेछैन।
पिक्सेलहेल्पर फाउन्डेशन एक अन्तर्राष्ट्रिय, नाफारहित, कलाकार सामूहिक र वरिपरि कार्य कलाको सबैभन्दा नवीन राजनीतिक इनक्यूबेटर हो। हामी कलालाई त्यस्तो चीजको रूपमा देख्छौं जुन उत्तेजित र विद्रोही हुनुपर्दछ, ज्ञानको भावनामा सामाजिक आत्म-आश्वासनको एक रूपको रूपमा। हाम्रो अभियानले देशको पाँचौं शक्तिको रूपमा कलाको सम्भावनाहरू देखाउँदछ।
ग्रीसमा हाम्रो अभियान जारी राख्न हामीलाई तपाईको मद्दत चाहिन्छ। #Paypal मार्फत दान: paypal@PixelHELPER.tv वा https://PixelHELPER.org/de/Spenden
डिजिटल दुनिया बाहिर दान को लागि:
मालिक: गैर-लाभकारी PixelHELPER फाउन्डेशन
विषय: कला र संस्कृति को लागी कोष
छाप नि: शुल्क। भौचर प्रतिलिपि अनुरोध गरियो। कृपया उल्लेख गर्नुहोस् "प्रेस फोटोग्राफर: डिर्क-मार्टिन हेन्जेलम्यान, पिक्सेल हेल्पपेरो.org"
ग्रीक ओलिगेरिया विरुद्ध अभियान मार्च 12th, 2018Oliver Bienkowski
विश्वव्यापी निगरानी खुलासा NSA
प्रेस लेखहरूको तस्वीरहरू
रेडियो र टेलिभिजनबाट भिडियो रिपोर्टहरू
हाम्रो अभियानलाई समर्थन गर्नुहोस्
मेडियनमा 13 लाइट प्रक्षेपण र स्थायी दबाव पछि सीआईए म्यानले जर्मनी छोडे। NSA मा डा हाउस मा या संयुक्त स्टेसी अमेरिका, वैश्विक कवरेज,
आईरिसमा आवरण कथामा ZDF 37 ° (सम्झौता)
ओलिवर बियनेकोस्की: हाम्रो डेटा को जासूस को साबित गर्न को लागी। धेरै मामिलामा यो रिपोर्ट गरियो। यहाँ हाम्रो भिडियोहरूको एक सिंहावलोकन हो। यस विषयको रिपोर्टहरू Google समाचारमा फेला पार्न सकिन्छ। हामी आगामी दिनमा यहाँ राख्दछौं।
अभियान भिडियोहरू र टिभि उपस्थितिहरू | ड्यूश वेले |
Oliver तल्लो transhipment साइटहरु मा एक TED टक शो, उहाँले कार्यरत छ कुन संग परियोजनाहरु: प्रकाश कला तिहार, सक्रियता, उदाहरण को लागि, साउदी अरब, एनएसए, आदि विरुद्ध हल्का कार्टून, र homelessness गर्न दृश्यात्मक ल्याउन हैकिंग मिडिया र अन्य मुद्दाहरू जुन मीडिया द्वारा बेवास्ता गरिन्छ।
ZDF on 37 मा एक छोटो वृत्तचित्रमा पिक्सल हेल्पर र ओलिभर देखाउनुहोस्, किनकि उनले बर्लिनस्थित अमेरिकी दूतावासमा प्रकाश प्रक्षेपणको आयोजन गरे। उनका प्रोजेक्टरले डसेलडोर्फको बन्करमा संकलनदेखि प्रेससँगको भेटलाई "एनएसए इन दा हाउस" लाईट आर्ट कार्टुनको वास्तविक प्रक्षेपण जुन पुलिसको आगमनसँगै समाप्त हुनुपर्दछ।
एआरटीई ट्र्याकहरूमा पिक्सेल सहयोगी। संघीय खुफिया सेवा, बर्लिनमा हल्का प्रक्षेपण। यो छोटो भिडियोले हल्का आक्रमण देखाउँदछ, ओलिभर बर्लिनमा फेडरल इंटेलिजेंस सेवाको भवनमा आयोजना गरिएको छ। प्रोजेक्शनले जनसंख्या बिरूद्ध गोप्य सेवाहरू लागू गर्ने अनुगमन विधिहरूको विरोध गर्न "BMW बरु BND" देखाउँदछ।
[Ut_video_youtube url = "A2Yb3gWmm2I"] अमेरिकी दूतावासमा किम Dotcom साथ पिक्सेल सहयोगी। संयुक्त राज्य अमेरिका। Der Spiegel "DerPakt" मा प्रकाशित। बर्लिनमा अमेरिकी दूतावासको बिरूद्ध एक कारबाही यस घरेलु भिडियोमा देखाइनेछ। भित्तामा बत्तीहरू: "संयुक्त स्टेसी अफ अमेरिका", तर पुलिस आईपुग्दासम्म।
डब्ल्यूडीआरले हालको घडीमा पिक्सेल हेल्पर, बीएनडी र एनएसए। १ 15.07.2013.०XNUMX.२०१ from को डब्ल्यूडीआरबाट प्राप्त यस घण्टामा उक्त पत्रकारले “युनाइटेड स्टेसी अफ अमेरिका” लोगोको प्रकाश प्रक्षेपणको बारेमा खबर गरे, बेनामी कार्यकर्ताहरूले अमेरिकी वाणिज्य दूतावासको आयोजन गरेका छन्।
डबल प्रक्षेपण Anke Engelke को प्रत्यक्ष WDR स्टूडियो। यस घरेलु भिडियोले देखाउँदछ कसरी स्लाइडहरू "NSA इन दा घर" लेबल लगाईएको छ र बोन र भियनामा संयुक्त राष्ट्र निर्माण भवन अघि कन्फिगर गरिएको छ।
अमेरिकाको दूतावास ह्याम्बर्गको प्रोजेक्टले पेडललाई पुलिसको डुङ्गा भेट्टायो। भिडियोले ओलिभर र अस्ट्रियाको कल्याणमा एनएसएको विरोध गरेर अस्ट्रियालीलाई बोलाएर एक सुन्दर अस्ट्रियाली खेतीमा विभाजित गर्दछ। त्यस पछि, तिनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिका भन्दा पहिले हैम्बर्गमा स्थित छन्, जुन तिनीहरू डुङ्गामा पुग्छन्। तपाईंले अस्ट्रियाई ध्वज कन्फिगर गर्नुहुन्छ, जहां एनएसए लोगो हो। कार्य कुनै अन्य जस्तै समाप्त हुन्छ: पुलिसको साथ।
हो हामी स्क्यान गर्छौं! स्लाग डेन रब, प्रोसिबेन टिभी प्रान्क। भिडियोले कसरी ओलिभर र उसको टोलीले कोलोनको "स्लाग डेन रब" मा विशेष प्रस्ताव राख्न एक जवानले शरीरको चित्रण गरेका छन् भनेर वर्णन गर्दछ। "हो हामी जासूस" भन्ने नाराको शवमाथि र ओबामाको अनुहार रंगिएको थियो। यो कार्य दुर्भाग्यवस तुरुन्त सुरक्षा द्वारा पत्ता लगाइएको थियो।
हाम्रा हल्का अनुमानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको ध्यान आकर्षण गर्छन् र सुनिश्चित गर्छन् कि यी महत्वपूर्ण मानवीय मुद्दाहरू बिर्सिएका छैनन्। कृपया हाम्रा परियोजनाहरू फेसबुकमा साझा गर्नुहोस्! यदि तपाईं हाम्रो कारण समर्थन गर्नुहुन्छ भने, हामी कुनै दानको लागि आभारी हुनेछौं, जसले हामीलाई हाम्रो अभियानहरू जारी राख्न अनुमति दिँदछ। केही युरो पनि फरक पार्छ! सेयरि car हेरचाह गर्दैछ। कृपया हाम्रो गैर-नाफामुखी संगठनलाई समर्थन गर्नुहोस्। </ strong>
बैंक: स्पार्कस्सी मगडेबर्ग
खाता नाम: PixelHELPER फाउण्डेशन गैर-नाफा संगठन
Https://PixelHELPER.org मा अधिक जानकारी
विश्वव्यापी निगरानी खुलासा NSA फेब्रुअरी 19th, 2018Oliver Bienkowski
राजनीतिक कैदीहरूका लागि अभियान
अरब स्प्रिंगले सफलता ल्याउन र लोकतान्त्रिक प्रलोभन सुरु गर्नुपर्छ। तर यिशैरीरको विद्रोह आज राजनीतिक कैदीहरू हुन्। मानिसहरु ईमिएटी इन्टरनेशनलमा आफ्नो जीवनमा खतरा भइरहेको छ। यहाँ पिक्सेल सहायक हस्तक्षेप र मुक्त राजनीतिक कैदीहरू चाहन्छन्।
हाम्रो पहिलो कार्यवाहीले नोभेम्बर २०११ पछि जेलमा रहेका १ people व्यक्तिलाई प्रकाशमा ल्याउनेछ। सरकारको षडयन्त्रको अभियोगमा उक्साउन "बहरेन १ 13" फेब्रुअरी २०११ को बहराइनको राजधानी मानानामा भएको दंगा पछि पक्राऊ परेको थियो। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाच जस्ता धेरै राज्य र संगठनहरू पनि बारम्बार यातनालाई औंल्याउँछन्। कैदीहरू अत्यन्तै चिन्तित थिए।
चिन्ता सुन्नु5वर्ष धेरै जीवन वाक्यहरूमा। सबैले आफ्नो मनको दाँया व्यक्त गरेको छ।
फेडरल चान्सेलरी र सऊदी दूतावासमा बेलिनेनमा प्रकाश प्रक्षेपण
राजनीतिक कैदीहरूका लागि अभियान फेब्रुअरी 19th, 2018Oliver Bienkowski
हतियार विरुद्ध अभियान
साउदी अरेबियामा ट्या tank्क निर्यात तुरुन्त रोक्नको लागि हेल्परले एक्शन आक्रोशको साथ प्रक्षेपण गर्यो - हतियारको कारोबार रोक्नुहोस्, फेडरल चान्सलरी र साउदी अरेबियाको दूतावासमा "साउदी अरेबियालाई धन्यबाद ट्या tan्क" भन्ने शब्दहरू छैन।
सौदी अझै पनि जर्मन सशस्त्र कम्पनीहरु को सबै भन्दा महत्वपूर्ण ग्राहकहरु को बीच छन्। सन् २०१ 2015 को पहिलो आधामा, हतियारको निर्यात साउदी अरेबियामा करीव १ million करोड युरोको अनुमोदन भएको छ - बेलायत र इजरायलसँग यो भन्दा बढी व्यापक परिचालनहरू थिए।
जर्मनी आर्मी निर्यातमा युरोपियन च्याम्पियन हो। विश्वभरि, यो तेस्रो स्थानमा अमेरिका र रूसको पछि लाग्छ। संघीय सरकारको स्वीकृतिको साथ जर्मन हतियार र सैन्य उपकरण तानाशाहता र साम्राज्य शासन जस्तै सउदी अरबको रूपमा आपूर्ति गरिन्छ। त्यो जारी राख्न सक्दैन। हामी पसललाई अन्त्य गर्न चाहन्छौं।
हतियार विरुद्ध अभियान फेब्रुअरी 19th, 2018Oliver Bienkowski
03 2016 सक्छ
Crowdhelp लाज बिना लाश
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 3। मई 2016
लाइभस्ट्रीममा अन्तरक्रियात्मक अनुभवको रूपमा मानववाद, फेसबुकमा इमोटिकन्स मार्फत वितरण। लाश कुनै पनि दौड, रङ वा धर्मलाई थाहा छैन। केवल दिमाग! बर्ड्स बिना लाश प्रोजेक्ट आफैले एक इंटरैक्टिव सहायता स्विम प्लेटफार्म को रूप मा देख्छ। नाम बाह्य नियन्त्रणमा राखिएको धेरै जम्बो कम्प्यूटरहरूको व्युत्पन्न हो। हाम्रो आशिष्ले मानवअधिकारको विनाशको समाधान भन्दा कम छ केहि अन्तरक्रियामा दर्शकहरूलाई लाइभस्ट्रीम मार्फत मद्दत गरेर। हाम्रो लक्ष्य: 24-घन्टा संसारको फोकल बिन्दुबाट लाइभस्ट्रीम। युद्धको क्षेत्रहरूमा पत्रकारहरू सम्बोधन गर्दै, शरणार्थी शिविरमा सहायता वितरण वा क्रुगर राष्ट्रिय पार्कमा लागेका शंकास्पदहरू, हाम्रो सम्भावनाको सम्भावना हाम्रो अनौठो छ। फेसबुकको भावनाले मद्दतको गन्ध नियन्त्रण र निर्णय गरेको छ।
बर्ड्स बिना लाश को लक्ष्य धेरै स्थानहरुमा छ, विकसित ब्याट्री सहित मोबाइल ब्याट्री लिने कपडा सहित; आन्तरिक WLAN क्यामेरा नियन्त्रणहरू, स्विमर नियन्त्रणको लागि अन्तरक्रियात्मक डाटाबेस सफ्टवेयर, RMTP को लागि ऐड-अनहरू ब्राउजर मार्फत समयको महत्त्वपूर्ण समस्याहरू समाधान गर्न फेसबुकको माध्यमबाट फेसबुकमा लाइवस्टस्ट्रीम नियन्त्रण समूहहरू हुन्छन्।
पहिलो प्रत्यक्षप्रवाह स्थलहरू सेनेगल, डाकर र एम्प; उत्तर अफ्रीका। PixelHELPER Ceuta मा एक प्रत्यक्ष प्रवाह स्थान सुरू गर्न चाहन्छ। हामी रोजगारको अवसरहरू पनि निर्माण गर्न चाहान्छौं जस्तै सेउटामा साइट वा मोरोक्कोको अर्को छेउमा शैवाल फार्म। शरणार्थीहरूको साथ उत्पादनहरू उत्पादन गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई अफ्रिकी महादेशमा राम्रो भविष्य दिन्छ। प्रत्यक्ष स्ट्रिममा सबै, तपाईं सँधै त्यहाँ हुनुहुन्छ र के हुन्छ निर्णय गर्नुहोस्। प्रत्येक स्थान लाईभ स्ट्रिममा दिनको समयमा प्रदर्शित हुने छ, अन्तर्क्रियात्मक टेलिभिजनको साथ झुण्डको सहायताको माध्यमले संसारलाई सुधार गर्ने।
प्राविधिक रूपमा, यसले कार्य गर्दछ ताकि हामी पारदर्शी नियन्त्रणको साथ एक लाइभ स्ट्रिम सुरु गर्दछौं र त्यसपछि सम्बन्धितहरूलाई "सीमा नाघेको लाम्बो" लाई आमप्रवाहमा आमन्त्रित गर्दछौं। त्यसैले हामी अन्तर्क्रियात्मक नियन्त्रणहरूको कोरियोग्राफीमा नजर राख्छौं र स quickly्कटको ठाउँमा प्रत्यक्ष प्रवाहमा परिवर्तन गर्न तुरून्त प्रतिक्रिया दिन्छौं।
फेसबुक बाहिर बाहिर दानको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गर्नुहोस्:
Ation दान फाराम: https://PixelHELPER.org/de/spenden
"यस कार्य को माध्यम ले प्राप्त सबै दान को लागि धन लाउडिंग एजेन्ट:
PixelHELPER फाउण्डेसन गैर-लाभकारी GmbH
स्टीन्डमम निजी पथ 3, 39114 मगडेबर्ग
जिल्ला अदालत स्टेंडल एचआरबी 22168
प्रबन्धक निदेशक: श्री ओलिवर बिएनकेवस्की
फोन नम्बर: 0049 163 71 666 23
जब सहरहरू युरोपको बाह्य सिमानामा आइपुगेका हुन्छन्, कसैले अरूलाई अझ राम्रोसँग युरोपको वरिपरिका बाटो पत्ता लगाउन मद्दत पुर्याउँछ। ठाउँमा शरणार्थियों को लागि एक नौकरी अवसर। एक ठूलो अल्गा खेतको साथ, भविष्य भविष्यको उत्तर अफ्रिकी महाद्वीपमा आउने आश्रितहरूको लागि प्रस्तावित गर्न सकिन्छ। सहायता केन्द्र लक्ष्यित बच्चाहरु, शरणार्थीहरू र अन्य शरणार्थीहरू जुन हामी हातमा लिन चाहन्छौं र एकीकरणको तयारीमा जान चाहन्छौं। शरण मानव अधिकार हो। यी मानिसहरू युद्धबाट भागिरहेका छन्, जुन प्रायः जर्मन जर्मन हतियारहरूसँग चलिरहेको छ। हामी युरोपियनहरूले यूरोपीय संघको बाह्य सीमामा मानिसहरूलाई हेर्नको लागि मानवअधिकार प्रतिबद्धता छ। यदि ईयू असफल भएमा, कार्यहरू एनजीओहरूद्वारा लिनु पर्छ।
Crowdhelp लाज बिना लाश मार्च 12th, 2018Oliver Bienkowski